Indlela yokwenza kwedivayisi kwamanethiwekhi ukukha apula ngezandla
Lapho sekuyisikhathi ukuqoqa izithelo ezihlahleni ezinde, amahle kakhulu futhi ezivuthiwe ziphezulu kangangokuthi ngisho ne iladi ukubafinyelela akunakwenzeka. Yiqiniso, kungenzeka ukuba usebenzise induku ende, ngawo ilele off. Ezinye balimi kuthiwa shaking izihlahla, kodwa apula zilimele ngesikhathi esifanayo futhi ulahlekelwe ukubukeka yabo ikhanga. Kungenjalo ungasebenzisa kudivayisi ukuqoqa apula. Uma kungenjalo ngaphansi kwesandla sami, kodwa ukuzuza akafuni ukuchitha imali, bese wenza ithuluzi ezifana ngesikhathi esifushane ongawaphatha. Ngenxa yalokho, ikwazi ukuthola plodosemnik ukuthi ngeke ziyahlukahluka phezu ukuphumelela ukusetshenziswa kwalokho okukhiqizwa endaweni yokukhanda.
Kukhethwa design izici ngaphambi ukukhiqizwa
Uma sicabanga plodosemniki, zingase zihlukaniswe ngamaqembu eziningana. Eyokuqala wabo limelela amathuluzi okuyinto ebekelwa bezihlahla ku ekupheleni induku. Ngosizo lokhu ibhekwa kungenzeka ukuba anqume isihloko sesiqu, kanye apula uyowela esitsheni, esemgwaqweni iseduze wokusika. idivayisi okunjalo ngoba ukukha apula Unommese ezithathekayo okuyinto eliqhutshwa wagxila ekhethekile. Ukusebenza thuluzi ngempela kuyakhathaza, ngoba wokusika itholakala ku-bar, ukuba ngqo, ingalo yayo eside. Lokhu kudala isisindo ezengeziwe, okuyinto hle kakhulu. Idivayisi iqoqo apula ingabhekisela iqembu lesibili, okuyinto okusikhumbuza amathuluzi isandla mechanical ifakwe iminwe. I run lokugcina wire. Ngemva apula noma eliphakathi kwe lizobanjwa ngosizo iminwe ekhethekile babancwebe ngu wagxila zokugcina, futhi isithelo esitsheni. Lesi senzo akhiqizwa Twine ezivamile. Kuvumela ukuhlukanisa izithelo. Ngenxa engakhi ithuluzi bungabonakala ukuthi kanye ipheya noma apula zingase zephule off futhi yegatsha.
Esesithathu iqembu plodosemnikov
Uma kuzokwenziwa kudivayisi ukukha ama-apula, bese sikwazi ukuthatha njengesisekelo iqembu lesithathu, okuyinto kakhulu izici design. ezakhiwe anjalo enziwa kusukela plastic nokunwebeka noma indwangu ukukhanya. Umkhiqizo okwenyanga kuyinto isitsha eline amacembe. isiqukathi Special ezizofakwa zibethelwa esigxotsheni. Emahhabhula isuswe ukujika elula emhlabeni pole-eksisi, okuyinto ngamakhasimende kanye. Isiqu yingakho behlise yi iyizingxenye ithuluzi.
Amalungiselelo womshini plodosemnika
Idivayisi ukuqoqa apula emthini kufanele lwenziwe kuphela ngemuva kokuthi izokhetheka omunye imiqondo. A okufana yesithathu ibe isisekelo lula design ithuluzi inhlangano izithelo. Okokuqala udinga ukulungisa ibhodlela plastic. Uma uzoqoqa ngokwanele usayizi Imiphumela umxhwele, lo efanelekayo ivolumu umthamo ngaphakathi 2 amalitha, kuyilapho ibhodlela efanelekayo, ivolumu elinganiselwe 1.5 amalitha apula naphakathi noma amagonandoda. Njalo umhlali ehlobo ezithile lapho kuzoba khona amabhodlela ezinjalo.
Uma eziyosebenza kudivayisi ukukha apula ngezandla zabo, bese kudingeka usike phansi ibhodlela, bese wenza ekhoneni cut. Sebenzisa ngesikhathi esifanayo kuyoba elula njengoba ummese noma sikelo. Isigaba ngenhla kanye ibhodlela kungenziwa ngakolunye uhlangothi.
Uma isitsha abakulungiselweyo, kumele exhunywe esibondeni, njengoba lokugcina okuyinto wesitimela ukukhanya eside kungaba isinyathelo. Nenkanuko edlulele kungase ufezwe wire noma ngethephu enamathelayo. Ngemva kwalokho, kuthathwa ngokuthi plodosemnik isilungele ukusebenza. Ukusebenzisa leli thuluzi kudingeka ukudweba ipheya noma apula phansi, bese aguquke eksisi. Lokhu kuzovumela izithelo ukusika umlenze nge notch esemgwaqweni ku insimbi. Apple kuyoba egabheni, okuyilona elisebenzayo futhi akwazi ukwenza njenge esitsheni for ukuqoqwa kanye isibani umsebenzi. idivayisi okunjalo ngoba ukukha apula kusukela ibhodlela plastic ingasetshenziswa ngaphandle ukwehlisa amandla isikhashana. Omunye ibhodlela ukwazi ukubona izithelo ngaphezulu.
Ukwenza plodosemnika amabhodlela kanye line ukudoba
Ngaphambi kokwenza kwedivayisi kwamanethiwekhi ukukha ama-apula, kudingeka unqume ukuthi ku ukuklanywa ithuluzi esizayo. Ngesisekelo angase alale zonke ibhodlela efanayo plastic, isibambo ukubhuqa, ngezinye izikhathi indawo nge PVC ipayipi noma isigxobo ski, kanye line ukudoba. Ubude yokugcina ingase ihluke 2.5 kumamitha angu-3. Udinga isikelo usungulo.
Okokuqala udinga ukwenza okuthiwa olahlekile elenziwe ibhodlela plastic. Phansi isitsha kufanele usike ukuze uthole usesimweni umqhele. isigcebe sembali ngamunye kwenziwa izimbobo ezimbili, ngoba lokhu ungasebenzisa usungulo noma imbobo Punch. Ngo esigabeni esilandelayo umkhiqizo kufanele inikwe ukuphikelela. Ngenxa yale njongo line ukudoba, ezisabalele ngokusebenzisa entanyeni emgqonyeni ukuze ekupheleni layo elingenhla ukuthi threaded ngokusebenzisa umbuthano hole ngamunye. Lokukhipha lesikafula kumele emuva ngokusebenzisa entanyeni. Lokhu uzothola ibhodlela, okuyinto elingenalo phansi. Ngokusebenzisa entanyeni kuyophuma ekupheleni ezimbili ezinde.
In the isinyathelo esilandelayo kuzolungisa umnikazi, indima okumele zisebenzisa PVC ipayipi egcwele. Umugqa double kusukela ibhodlela kuyadingeka ukuba adabule imbobo somnikazi, usuka ohlangothini emuva. Uma isibambo ukubhuqa nge isibambo detachable, lokhu yisisombululo omuhle. Le ngxenye umnikazi ngeke kulondeke emikhawulweni line ukudoba. Isibambo ukwenza-imbobo ezimbili, lapho umugqa ukudoba threaded semikhawulweni awashintsheki ngakolunye uhlangothi tautly. Isibambo ke futhi wagqoka isibambo. Uma uke wenza amalungiselelo okuba iqoqo amagonandoda kanye apula, kubalulekile ubuthe yonke isakhiwo ukuze ibhodlela plastic kwakuncike kakhulu enamathiselwe umnikazi. imiphetho Sika ezigoqwe ibhodlela. Ngakho kubalulekile ukwenza ukunyakaza ukuziqonda. Lesi isimiso yokuvuna uyalisebenzisa yini leli thuluzi. Uma swab akububonisi Removable ingxenye, isidingo ukuqeda ekupheleni kwalo, kufanele kube ashona 10 cm. Ezinhlangothini kudingeka wenze izimbobo ezimbili, okuyinto threaded semikhawulweni line ukudoba. Ngemva isidingo sabo ukulungisa ndawonye bese ukuxhumanisa.
Izincomo wazibonela umhlali ehlobo
Ukuze PVC ipayipi njengoba isibambo, ungafaka isicelo ofeleba ambalwa kusuka amabhodlela. Uma usebenzisa ofeleba eziyishumi, Esenze abahlala engxenyeni ephakathi ye-hole ngamunye ngosungulo, imikhawulo khulula we line ukudoba kungenziwa threaded ngokusebenzisa amakepisi, nokubopha ukuba lakamuva. Ukuze umtshina uhlaliseke zamabhodlela kudingeka ukunamathisela ndawonye ukwenza ifindo noma ngokuwufaka ngesizotha kusuka ngaphakathi kwesembozo kuqala. Lokhu uzothola elula isibambo ngokwanele esikhiphekayo eyenziwe ofeleba. Kuyadingeka ukuba sisebenzisa ubuchwepheshe obufanayo njengoba kwaba njalo endabeni ka-isibambo ukubhuqa.
Uma unquma ukwenza idivayisi lokuqoqa apula phasi, ungasebenzisa omunye ubuchwepheshe ngenhla. Nokho, ungase ube ukubeka ibhodlela akuyona kanye nenduku-umnikazi, futhi nge-engela ezithile. Lokhu kuzovumela ukuqoqa e esitsheni esisodwa ukuze amahabhula amane, kuye ngokuthi ungakanani, bese uthele kubo ibhakede. Enye yalezi amadivaysi ilula ngokwanele ukwenza bebodwa. Anazi ngisho kufanele uvakashele isitolo ukuze ukuthenga izinto.
Abamba Ukushisa PVC amapayipi: izandla zabo zingenziwa?
Ingabe ufuna ukufunda ukwenza umnsalo ekhaya?
Ukuqina lokhuni ekhaya: the izingoma, ubuchwepheshe
Maria Kazankova: Biography futhi ukuphila komuntu actress
Umsebenzi Amanzi: incazelo, izinhlobo, lemigomo kanye nemihlahlandlela
Black ingubo nge tights abamnyama. Yini tights ukugqoka ngaphansi ingubo emnyama
Ekubulaweni Kwezinzwa "Sevoranom": yokusetshenziswa, imiphumela Izibuyekezo
Calcium oxide. Izakhiwo, ezishisayo futhi amakhemikhali. Isicelo.
Inyama yenkomo Steak
Kuphi ngoJuni i esijabulisayo?